Sir culus:Sababta ay Itobiya ugu xusul duubayso soo noqoshada Xasan shekh. | ogaden24
Sir culus:Sababta ay Itobiya ugu xusul duubayso soo noqoshada Xasan shekh.
Waxaa jira Qorshayaal is dul saaran oo isugu Jira Fulinta mashaariic siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale badan kubaxayo, mashaariicdan Qayb ahaan waxaa Qandaraaskooda bixinaya Maraykanka waxaana dhisaya shirkad dalka Turki laga leeyahay.
Itobiya waxay dawlada Maraykanka u Gudbisay Qorshe Guda balaadhan oo Soomaaliya looga ilaalin karo inay kasoo baxdo dawlad adag oo mar kale cagaheeda isku Taagta, si taasi loo Gaadhana waxay ka dalbatay Maraykanka in kala dhantaalida awooda Somaaliya ay kow katahay xoojinta qaar kamida maamul Goboleedyada, gaar ahaan kan Konfur Galbeed oo dadkiisu Aaminsan yihiin in la Takooro.
Itobiya iyada oo ka Faa’iidaysanaysa xidhiidhka wanaagsan ee dadka Somaalidu la leeyihiin Turkiga ayay soo Jeedisay in mashaariicda lasiiyo shirkado Turki ah, kadib aqbalaada Maraykanka Itobiya waxay Qorshaha u Gudbisay Shariif Xasan Shekh Aden madaxwaynaha Konfur Galbeed waana uu Ladhacay, kadibna waxaa loo Gudbiyay Xasan shekh oo Taageerada Itobiya aad ugu baahan kaasi oo isna dhankiisa Gacmo Furan kusoo dhoweeyay.
Hadaba sida xogta aanu kuhelay Qorshuhu waxaa uu leeyahay 3- Waji oo is xiga hadii lagu Guulaystana waxaa loo fulinaya sida ay u kala Horeeyaan oo ah sidan Hoose.
1) Mashruuca Koowaad waa dhismo waddo caalami ah oo laga dhisayo laga bilaabo magaalada Baraawe oo ku magacaaban caasimada maamulka Konfur Galbeed ilaa iyo degmada Tiyeeglow ee Gobolka Bakool.
Dhismaha wadadan waxaa maal Galinaya oo kharashka kubaxaya Qalinka ku duugay madaxwaynihii Hore ee Maraykanka Brack Obam waxaana Qandaraaska Qaadanaysa shirkad laga leeyahay dalka Turkiga.
2) Mashruuca Xigo waa dhisida Qalabaynta iyo Balaarinta Dekeda mac-malka ah ee magaalada Baraawe si maamulka ay ugu noqoto il dhaqaale, mustaqbalka Fogna ay Itobiya u adeegsato maadaama ay iyadu Wakiil katahay dhismaha Dekadaasi.
3) Mashruuca Qaybtiisa u danbayso Waa dhisida waddo Laami ah oo isku xidhi doonta magaalada Godey ilaa iyo degmada Tiyooglow ee Gobolka Bakool, taasi oo sida xogta aanu kuhelay Itobiya ay kala Heshiisay Baanka aduunka waxaana Qorshuhu yahay in shirkad Shiinays ah lasiiyo Qandaraaska wadadaasi.
Mashaariicdan oo hadii ay Hirgalaan noqonaya kuwo Horumarineed oo aad loogu baahi Qabay ayay Itobiya Hirgalintoodu kuxidhan tahay Xasan shekh oo dib loogu doorto madaxwaynaha Somaaliya, si taasi ay u dhacdana waxay Itobiya ku khasbaysaa Shariifka inay xildhibaanada Konfur Galbeed doortaan Xasan shekh.
Qorshaha Itobiya ayaa ah in maadaama aysan maamul Goboleedyada Daaroodku aaminsanayn dawlad Xamar kadhalata oo Hawiye madaxwayne kayahay in maamulka Konfur Galbeedna lagu daro safka maamulada colka la ah Xamar, si marna aysan Somaaliya uga Hanaqaadin dawlad loo dhan yahay oo laxisaabtami karta cadawgeeda iyo saaxiibkeeda.
Qorshahani ayaa waxaa uu ku fashilmi karaa oo kaliya 2-arimood oo kala ah (1) in Xasan Sheekh ku Guuldaraysto Tartanka dib u doorashadiisa (2) in madaxwaynaha cusub ee Maraykanka uu Laalo Heshiiskii madaxwaynihii kahoreeyay ee bixinta kharashka dhismaha Wadada iyo Dekada Baraawe.
Xogtani waxaan kahelay muwaadiniin isugu jirta siyaasiyiin iyo Ganacsato ree Konfur Galbeed ah.